... that time but he became very young again after had the golden mango etc... Download Related Articles Historic sites and monuments of Mandalay and environs - U Lu Pe Win မန္တလေးဖြစ်စဉ် ...
2. ခမ်းတီးလုံဒေသသမိုင်း - မီမီလွင်(သုတေသနအရာရှိ)
... Myanmar - Mie Mie Lwin Khamti ...
3. ပုဂံသင်္ကြန် - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
... တွက်ပေးခဲ့တဲ့ အာဝင် (Sir Alfred Irwin) ကတော့ ပုဂံခေတ်မှာ မကာရန္တနည်းကို သုံးတယ်လို့ (အလုပ် ဖြစ်အောင်) ယူဆပြီး တွက်ယူ ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအယူအဆကို ကျွန်တော်တို့ ဆက်ခံပြီး တွက်ယူနေကြပါတယ်။ ပုဂံခေတ်က နှစ်ဟောင်း ...
4. မြန်မာ့သမိုင်းအဖွဲ့က ထုတ်ဝေပြီး ထုတ်ဝေဆဲ စာအုပ်တို့ကို ဝေဖန်ခြင်း - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
... ပုဂံခေတ်(တစ်ဆယ်ရာစုနှစ်က စပြီး) ပြန်တွက်ထားရ တယ်။ A.M.B Irwin (အာဝင်) အင်းဇယားတွေအရ၊ ဘယ်သက္ကရာဇ်ဟာ ဘယ်ခရစ်နှစ်လဲလို့ ပထမရှာတယ်။ ပြီးမှ ရှေ့ပိုင်းက မြန်မာသက္ကရာဇ် ရက်စွဲတွေကို၊ ဂျူလီယန်ရက်စွဲ ရှာရတယ်။ ၁၇၅၂ ...
5. MOUNT POPA တောင်တော်ရွှေပုပ္ပါး
In my childhood one day morning, I saw an unforgetable Drawing. My mother lifted me and put me on her shoulder, and asked, "Can you see Mt. Popa - my son-dear." I raised my head and looked towards ...
6. ကွယ်လွန်သူ မစ္စတာဖာနီဗယ် The Late J.S. Furnivall
... us. Tr. Win Pe ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှစ်လည်​စာစောင် ၁၉၅၉-၆ဝ၊ အတွဲ ၄၊ အမှတ် ၁၊ နှာ ၂။ Rangoon University Annual Number 1959-60 ...
7. A Brief Account Of The Akha In The Kyaington Area, Myanmar - Mie Mie Lwin
eBook file size: 471 KB ebook pages: 18 Publication: Myanmar Historical Research Journal, Number(13), June, 2004, Page-97-108 Download -Related Articles- ချစ်စဖွယ် ဂုံအမျိုးသားများ ...
8. Historic sites and monuments of Mandalay and environs - U Lu Pe Win
... Of Pagan - U Lu Pe Win ...
9. National Land Use Policy (Draft) 2014
eBook file size: 272 KB ebook pages: 41 Publication: Government of the Republic of the Union of Myanmar Land Use Allocation and Scrutinizing Committee, Oct, 2014. (This book was sent by Ko San Lwin Oo, ...